Mudane Faratoon Ayaan U dooran lahaa Gudoomiaha Wakiilada Waayo? – hogaanka.org
Faalo Kooban oo ku Saabsan Faratoon oo ay ka diyaariyeen HCTV
Sababta aan hadii aan ka mid ahaan lahaa xubnaha cusub ee wakiilada Somaliland aad codkeyga ugu hibeyn lahaa aniga oo aan u eegin in aan isku xisbi nahay waxaa tahay arimahan:
1- Rasamaalka Aqooneed ee Mudane Faratoon
Mudane Maxamed wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Somaliland ee ka sii nool ruug cadaayadii soo aflixiyey kumayaal aqoon yahano oo Somaliyeed waayo waxaa u mudo badan ahaa bare sidaa darteed kol hadii uu ku suntan yahay Macalin codkeyga waa siin lahaa marka aan ku qiimeeyo kaalintiisa macalin nimo kol hadii aanu jirin macalin la khibrada oo tartan kula jira.
2- Rasamaalka Siyaasadeed ee Mudane Faratoon
Mudane Maxamed doorkiisa siyaasadeed waa mid ka tarjumeysa in dadka la tartamaya inta aan ogahay in aaney jirin qof xitaa u soo dhow khibrad ahaan in uu codkeyga helaa waa mid xaq igu ah, wooyo :
a) Mudane Maxamed wuxuu noqday Badhasaabkii ugu horeyey ee Gobolka Sool dib u dhalashadii Somaliland Sannadkii 1991-kii.
b)Mudane Maxamed wuxuu La soo shaqeeyey 5 Madaxweyne ee Somaliland yeelato in tii ay ka baxdey midowgii Somaliya waxaanu soo qabtey xilalka ugu muhiimsan ee Jamhuuriyada Somaliland sida:
Wakhtigii Cabdiraxmaan Tuur oo ahaa madaxweynaha Somaliland, Faratoon wuxuu ahaa Guddoomiyihii u horreeyey ee Gobolka Sool sannadkii 1991-kii.
Sidoo kale, dawladdii Maxamed Ibraahin Cigaal ee lagu soo dhisay magaalada Boorama 1993-kii, waxa uu ka noqday Wasiirkii Caafimaadka.
xilligii ururrada siyaasadda wuxuu safka hore kaga jiray Ururkii ASAD ee uu hoggaaminayay Md. Saleebaan Maxamuud Aadan oo hadda ah Guddoomiyaha Golaha Guurtida, kaasoo waqtigaas hoggaaminayey mucaaradkii ugu awoodda badnaa, laakiin markii ururkiisii ku guul-darraystay inuu u soo baxo heer xisbinimo doorashooyinkii Golayaasha Degaanka ee sannadkii 2002, waxa Yaasiin Faratoon ka mid ahaa garabkii ku biiray xisbigii UDUB.
Markii ay qabsoontay doorashadii Madaxtooyada Somaliland sannadkii 2003-kii, Madaxweyne Rayaale ayaa siyaasiga Yaasiin Faratoon u magacaabay Wasiirul-dawlaha Dib-u-dejinta, hase ahaatee muddo kadib wuxuu dalka uga baxay dhinaca qurbaha, isagoo iska casilay xilkaas, wuxuuna dib ugu soo laabtay dalka mudo ka dib.
Mudane faratoon wuxuu Wasiirka Arimaha Gudaha ka noqday xukuumadii Axmed Siilaanyo, ugu dambeyntii waxaa uu Xukamada maanta talada somaliland haysa ee Muuse Bixii waxaa uu ka soo qabtey Wasiirka arimaha debeda.
3) Raasamaanka Dhaqan ee Mudane Faratoon
Dadka Yaqaana Yaasiin X. Maxamuud Xiir (Faratoon), waxay ku tilmaamaan inuu yahay qof aqoon iyo waayo- aragnimo u leh arrimaha maamulka, isla markaana arrimaha dhaqanka wax badan ka yaqaan, isagoo xilligii dawladdii Soomaaliya noqday macallin meelo badan ka soo shaqeeeyay. Sidaa awgeed, uu ku kasbaday wax badan, waqtiganan. Mudane waa Siyaasi iyo macalin degen oo si miisaaman uga fikira waxaa uu ka hadlayo, waxaana uu yahay dadka xaga da’da ugu weyn ee golaha cusub ee Somaliland waana nin lagu aamini karo isku wadaka xubnaha golaha iyo siyasada guud ee qaranka Somaliland.
Markaan Faylkiisa shaqo waayo aragnimo aqooneed iyo dhaqan ee mudane Faratoon eego waxaa ii soo baxay in cid ka mudan tartana kaga horeynaysaa in aysan jirin qiimeyntey taas ayaan ku siin lahaa codkeyga mudane faratoon, balse ma hubo in ay sidan koo kale u qiimayn doonaan mudanayaasha kale ee codka dhabta ah lihi mudane maxamed oo ah horyaalka mudanayaasha Somaliland ee Soo baxay.
Hadii uu ku guuleysto Mudane Faratoon waxaa uu noqondoonaa mid uga faa’iideya aqoontiisa,waayo aragnimadiisa wadaniyadiisa wakiilada Cusub oo uu macalin u noqondoono wax badan ku soo kordhindoona golaha wakiilada waxaa aan u soo jeedin lahaa xubnaha golaha wakiilada iney isku miisaamaan faratoon iyo cida la tartameysa iyaga oo aan u eegin xisbi iyo is xulufeysi balse ka eega dhinaca taydada, daacadnimada wadanka aqoonta iyo hogaaminta taas ayaa goluhu horumar ku gaadhidoonaa Isha Allah.
Data protection: Commission adopts adequacy decisions for the UK — The European Sting – Critical News & Insights on European Politics, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology – europeansting.com Previous
Dahabshiil iyo Dhismaha 30 dabaq ah ee Muqdisho uu ka Cilaamiyey Ma yahay mid ku Haboon Wakhigan? Next